Nagarik News - 'र' प्रेमी ओझा
असफल श्रीमान् र सफल निर्माता भनिन्छ छवि ओझालाई। उनी 'र'लाई असाध्यै माया गर्छिन्। श्रीमतीका रूपमा 'र' तीनजना महिलासँग जोडिसके। पछिल्लो समय रेखा थापासँगको सम्बन्ध 'र' बाट 'तर' हुँदै फिल्म 'लोफर'पछि व्यावसायिक तथा पारिवारिक रूपमै 'पर' भयो।
उनले यो फिल्मबाट नयाँ 'र' भित्र्याएका छन्। ती हुन् रजनी थापा। 'र'बाटै नाम सुरु भएकी थापा नै थरकी युवती रेखालाई काउन्टर दिन ल्याएको हल्ला फिल्मनगरीमा व्यापक छ। सुटिङमा आउजाउ गर्ने र फिल्मको पोस्टर हेर्नेले रजनीलाई रेखासँग तुलना पनि गर्न थालेका छन्। उनीहरू भन्छन्, 'छविले रेखाको उत्तराधिकारी ल्याएका रहेछन्।' यो पनि खुलाइदिए हुन्थ्यो, फिल्ममा मात्रै हो कि घरमा पनि!
'हिरो होइन, कलाकार महत्त्वपूर्ण!'
खगेन्द्र लामिछाने रेडियो नाटक लेखक र निर्देशकका रूपमा चर्चित छन्। उनी लेखन र निर्देशनमा आबद्ध 'कथा मीठो सारंगीको' निकै लोकप्रिय रहेको थियो। यसबाट उनको टिमले सन् २००९ मा दुई विधा...
बैँसमा म एकदमै अनुशासित थिएँ : प्रेमध्वज प्रधान (७८)
जन्मथलो सिन्धुपाल्चोक चौताराबाट आठ वर्षको उमेरमा काठमाडौँ झरेँ। बुबा व्यापारी भएकाले यता पनि घर बनाउनुभएको थियो। यतै पढाइ सुरु गरियो।
अंग्रेजी नयाँ वर्ष भव्यतापूर्वक मनाउने शहरिया नयाँ पुस्तालाई विक्रम संवत्को नयाँ वर्ष खासै उल्लासमय लाग्दैन। नेपालीको मौलिक उत्सव हो, वैशाख १ गते। संस्कृतिविद्हरू यो दिनको विशेष महत्व भएको बताउँछन्। यो...
कहिले कसले जिते विश्वकप?
सन् १९३०, उरुग्वे (पहिलो विश्वकप) विजेता– उरुग्वे उपविजेता– अर्जेन्टिना तेस्रो– अमेरिका चौथो– युगोस्लाभिया